Fox News Poll: Socdaalka iyo Dhaqaalaha Taakulada ugu Wan Doorashada - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Fox News Poll: Socdaalka iyo Dhaqaalaha ugu Sarreeya Codbixiyayaasha
socdaalka waa mudnaanta koowaad ee Jamhuuriyeyaashu, laakiin qaar ka mid ah soo jeedimaha siyaasadeed ee dhowaan ka dhexjiray xisbiga. Mitch McConnell oo ah Hogaamiyaha Aqlabiyadda Aqalka Guurtida Mitch McConnell ayaa sheegay in Madaxwaynaha Trump uu ku xirayo xudduudda koonfureed si uu u cadaadiyo Mexico si loo joojiyo socodka dadka soo galootiga ah ay yeelan doonaan "saameyn xun oo dhaqaale ah" dalka. Ugu dambeyntii Fox News waxay muujineysaa in 75% Jamhuuriyeyaashu ay ku fekerayaan xiritaanka xuduudda waa fikrad wanaagsan.
Guud ahaan, cod-waxay aaminsan yihiin in ku dhow soohdinta waa fikrad xun (41 53 ka dhanka ah), iyo sida ay kala duwan yihiin of dhibcood 24, waxay aaminsan yihiin in socdaalka halkii ka caawisaa badan garaacid dalka (48-24%).
HALKAN KA HELI KARTAA SIYAASADAHA
Markii la waydiiyay su'aasha ugu muhiimsan ee waddanku, 21% codbixiyayaashu waxay qeexeen socdaalka iyo 10% dhaqaalaha . Kuwani waa dhibaatooyinka kaliya ee soo jiidanaya laba-dhajiye. Daryeelka caafimaadka (9%), isbeddelka cimilada (6%) iyo xidhiidhada jinsi (5%) dhamaystiraan 5 ee ugu sareysa.
Muuqaalka Jamhuuriyaadka ayaa u riixaya soogalootiga ugu sarreeya, iyada oo 38 ay sheegeyso inay tahay dhibaatada ugu weyn. waxaa ku xiga dhaqaalaha 10%. Kaliya 7% Democrats ayaa mudnaanta koowaad siinaysa socdaalka, dhibaatooyinkooda ugu weyn ee daryeel caafimaad (13%) iyo isbedelka cimilada (11%).
Saddex meelood meel oo codbixiyeyaasha ah (33%) waxay leeyihiin aragti wanaagsan oo ah magaalooyinka dukumiintiga, halka ku dhawaad ​​kala bar, 45%, iyaga si xun u arag.
Madaxwaynaha ayaa sheegay inuu qorsheynayo in uu soo galo muhaajiriinta sharci-darrada ah ee magaalooyinka dukumintiga ah
Marka la eego daaweynta qaxoontiga sharci darrada ah ee maamulka, 41% waxay yiraahdaan "aad u daran", halka 25% aysan ahayn mid xoogan, 27% waxay yiraahdaan "sax".
Inta badan cod bixiyeyaasha, 43%, waxay u maleynayaan in maamulka uu yahay "mid aad u adag" ee la xaajoodka soogalootiga magangelyo doonka ah, halka 17% aysan ahayn mid xoogan, 32% waxay yiraahdaan "xaq aad u fiican".
Jamhuuriyeyaashu, si kastaba ha ahaatee, waxay dareemaan si kala duwan: ku dhawaad ​​kala badh waxay aaminsanyihiin in Trump uusan "ahayn mid aad u daran" oo ka dhan ah muhaajiriinta sharci-darrada ah (46%) oo raadinaya dheelitirka saxda ah ee magangalyo-doonka ( 55 boqolkiiba).
Muhiimadda labaad ee codbixiyayaasha, dhaqaalaha, 44% waxay yiraahdaan waa caafimaad wanaagsan ama caafimaad wanaagsan. Tani waxay ka dhigeysaa 11 dhibco ka sareeya 33 boqolkiiba dhamaadka 100 maalmood ee maamulka Trump (Abriil 2017).
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wali shaqeynaya in la qabto. Inta badan, 54%, waxay u maleynayaan in dhaqaalaha uu ku jiro xaalad xun.
"Waxaa jira kala duwanaansho aad u ballaaran ee kooxo kale oo ka wanaagsan kuwa kale oo ku saabsan dhaqaalaha," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Chris Anderson, oo madax ka ah doorashadii Fox News ee Republican Daron. Shaw.
"Ragga, caddaanka, codbixiyayaasha dakhliga badan leh, iyo gaar ahaan kuwa Jamhuuriyeyaashu, waa kuwo dhaqaale ahaan aad u fiican, iyada oo haweenka, kuwa aan cidi lahayn, qoysaska dakhliga hoose, dimuqraadiyada iyo madax-bannaanida . "
Intaa waxaa dheer, dad badan oo dheeraad ah oo ku qanacsanayn sida wax u socdaan ee dalka: 58% ku qanacsanayn, dhanka ah 55% ee April iyo 53% boqolkiiba laba sano ka hor (April 2017).
Ku saabsan isla lambarka ayaa u maleynaya in dhaqaalaha uu ka fiicnaan doono (27%) sanadka soo socda, marka ay ka sii darayso (25%). Qeybta ugu sarraysa, 42%, waxay u maleyneysaa in tani aysan isbeddeli doonin.
Dhammeeyey 14 in 16 April 2019 hoos wadajirka ah ee Beacon Research (D) iyo Shaw & Company (R), ku ra'yiururin Fox News ku jira waraysi of 1 005 kala sooc lahayn loo doortay cod-bixiyayaasha diiwaan-gashan dalka oo, kuwaas oo la hadlay waraysanaysa Live on telefoonada go'an iyo mobile. Ra'yiururinta ayaa ayaa sampling margin qalad ah oo lagu daray ama laga jaray boqolkiiba saddex dhibcood oo dhan cod-bixiyayaasha diiwaan-gashan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.foxnews.com/politics/fox-news-poll-immigration-economy-top-list-of-voter-concerns
[Tribune] Jooji Rabshadaha lagula Kaco Haweenka - JeuneAfrique.com